नयाँ वनडे लिगको प्रस्ताव, नेपालले टप १० टेष्ट टिमसँग खेल्न सक्ने ! - वीर गोरखा
Home / cricket / nepali Cricket / Nepali News / slider / काठमांडो / क्रिकेट / खेल / नेपाली भाषा / नयाँ वनडे लिगको प्रस्ताव, नेपालले टप १० टेष्ट टिमसँग खेल्न सक्ने !
नयाँ वनडे लिगको प्रस्ताव, नेपालले टप १० टेष्ट टिमसँग खेल्न सक्ने !
दीपक राई Sunday, June 19, 2016 cricket, nepali Cricket, Nepali News, slider, काठमांडो, क्रिकेट, खेल, नेपाली भाषा
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले नयाँ एकदिवसीय लिगको प्रस्ताव तयार पारेको छ। जसमा टेष्ट मान्यता प्राप्त शीर्ष दशसहित १३ देशको सहभागिता रहनेछ र, १३ औं टिमको रुपमा नेपाल प्रमुख दाबेदार छ। यो प्रस्ताव आईसीसीको अब हुने बाषिर्क साधारणसभामा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट पास भए २०१९ बाट लागू हुनेछ। टेलिग्राफका अनुसार प्रस्तावित लिगमा १० शीर्ष टेष्ट टिम रहनेछ। यस्तै अफगानिस्तान र आयरल्याण्डे पनि खेल्ने पक्का जस्तै छ। १३ औं टिम एशोसिएट नेशनबाट हुनेछ। यो लिग तीन वर्षको हुनेछ र यो अवधिमा सबै देशले एक अर्कासँग होम एण्ड अवेका आधारमा खेल्नेछन्। प्रस्तावित योजना अनुसार हरेक टिमले तीन म्याचको सिरिज खेल्नेछन्।
यस आधारमा हरेक टिमले तीन वर्षमा ३६ एकदिवसीय खेल खेल्नेछन्। लिगको शीर्ष दुई टिमले प्ले अफ सिरिज खेल्नेछ र, त्यसको विजेता एकदिवसीय लिगको विजेता हुनेछ। यसलाई हरेक चार वर्षमा हुने विश्वकपको तयारीका रुपमा समेत हेरिएको समाचारमा जनाइएको छ । यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा स्वत छनोट हुने र विश्वकपमा सहभागी हुने प्रणाली बस्नेछ। लिगमा पुछारमा रहने टिम विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा घटुवा हुनेछ। यदि यो प्रस्ताव पास भएमा अफगानिस्तान र आयरल्याण्डको क्रिकेट विकासमा ठूलो फ्ड्को हुनेछ। १३ औं टिमका रुपमा नेपालको सहभागितामा भने केही प्रश्न रहेको क्रिकइन्फोले जनाएको छ।
आईसीसीलाई नेपालमा बढ्दो क्रिकेटको लोकपि्रयता राम्ररी थाहा छ। र, त्यही आधारमा नै नेपाललाई विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेल्ने मौका दिइएको छ। अब एकदिवसीय लिगमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा प्रदर्शन सुधार्न जरुरी छ। च्याम्पियनसिपको शीर्ष स्थानमा नेदरल्याण्ड्स छ। नेपाल भने छैटौं स्थानमा छ। यदि नेपाल यो लिगमा रेलिगेशनमा परेमा यो एकदिवसीय लिग खेल्ने सम्भावना कम हुनेछ। टेलिग्राफले भने एकदिवसीय लिगमा १३ औं स्थानको दाबेदार स्कटल्याण्ड पनि भएको बताएको छ ।